Wasiirkii Gaashaandhiga Soomaaliya oo iscasilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirkii Gaashaandhiga Soomaaliya oo iscasilay
October 12, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Wasiirkii Gaashaandhiga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirkii Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa iscasilay maanta oo Khamiis ah.
Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa waraaqdiisa iscasilaada u gudbiyay Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, kaasoo aqbalay.
Iscasilaada wasiirka ayaa timid saacado kadib markii taliyaha ciidanka Soomaaliya Maxamed Axmed Jaamac ayaa xilkiisii iska casilay.
Si kastoo ay ahaataba, sababaha ka dambeeya iscasilaadooda ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda.
Madaxweynaha Puntland oo Dubai kulan kula yeeshay masuuliyiinta shirkada DP World
Dubai-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Isniin ah magaalada Dubai kulan kula yeeshay masuuliyiinta sare oo katirsan shirkada DP World. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Puntland, kulanka ayaa [...]
Qarax dhimasho sababay oo ka dhacay xarun booliis oo kutaala koonfurta-bari ee Turkiga
Istanbul-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 11 booliis ah ayaa lagu dilay 70 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar loo adeegsaday gaari lagu qaaday xarun booliis oo kutaala magaalada Cizre ee koonfur-bari dalka Turkiga, sida [...]